Ahoana no fomba hitondrana ny fiovana lehibe raha 99% no tsy mananaina? : Martin Vrijland
Filed in NY SIMULATION	by Martin Vrijland	amin'ny 15 Jolay 2019	• 32 Comments
Ankehitriny dia tonga amin'ny famaranana fa maro amintsika manodidina antsika no tsy manana fananana ara-bakiteny (jereo ity lahatsoratra ity), Mangataka anao hieritreritra momba io fanamarihana io aho. Tsy midika hoe 'amin'ny fomba fiteny' na 'amin'ny metaphor' aho, tsy midika ara-bakiteny hoe tsy manan-kialofana. "Mandehana ary mihabetsahaFanambarana malaza avy ao amin'ny Baiboly. Tsy misy na inona na inona, satria tsy maintsy mameno ireo bio-avatara tsy manan'aina ity planeta eto an-tany ity ary ny fiangonana dia nandray anjara lehibe amin'izany. Ary rehefa teraka na fitaomam-panahy ny zaza dia misy ny batemy izay nomen'ny ray aman-dreny ny andraikitry ny ray aman-dreny amin'ny fiangonana amin'ny alàlan'ny batisa anaty rano (jereo ny horonantsary etsy ambany). Izany dia fanamarinana tsara voalohany nataon'ireo mpiambina ny script mba hahitana raha nirina ny sarin'ny zaza vao teraka.
Ankehitriny, ny Eglizy Katolika dia mbola toeram-piarovana lehibe indrindra eran-tany; miaraka amin'ireo ra mandriaka aristokratika miara-miasa amin'ny soratra masina: ny fiangonana amin'ny alàlan'ny sainy dia mifehy ny fivavahana sy ny aristokrasia amin'ny maha-vondrona mpanatanteraka eo amin'ny sehatry ny politika sy orinasa izay miafina ao ambadiky ny fisehoan'ny demokrasia, banky ary ireo olom-pirenena marobe, izay mamela ny tehim-pahefana ny vavoniny. Ny script lehibe dia mitodika foana amin'ny fifanoheran-kevitra sy ny tsy fitoviana mba hitazonana ny fandehanana amin'izao fotoana izao (toy ny plus sy plus poles izay mamokatra angovo mivantana). Ireo maso ratsy kokoa tsy hita maso (mora ny fandaharam-potoana) izay nanolo-tena hanohanana an'io fitondrana herinaratra io, dia mora kokoa ny mitazona ny ampahany kely amin'ny 'fanahy'.
In ity lahatsoratra ity Nohazavaiko fa ny atidohan'olombelona dia voarindra avy amin'ny fiaramanidina. Azafady vakio tsara ireo lahatsoratra roa ireo alohan'ny hanohizanao hamaky teny. Zava-dehibe ny hahalalanao an'ity izao tontolo izao ity ary izao tontolo izao ho an'ity: a simulation.
Zava-dehibe ihany koa ny mahita fa ny (amin'ny famerenana) ny bio-avatars amin'ny endriny samihafa dia manana karazana fahaiza-manitikitika an-tsoratra izay hitombo hatrany amin'izao fotoana izao. Ny atidoha ao amin'ny atin'ny vatan'olombelona (sarin'olombelona) dia mahira-tsaina mba hianatra, hanaraka ny fianarana, hanao asa, hankafy mozika, mandihy, mijery horonantsary, mandeha fialantsasatra ary mankafy. Na izany aza, avy amin'ny ambaratonga maha-tsikombakomban'ny olombelona AI (fahaiza-manintelo). Ny dingana mitovy amin'izany dia efa manomboka eo amin'ny tontolon'ny teknolojia, mba hahafahantsika mahatsapa izany tsaratsara kokoa.
Omaly dia nisy hafatra navoakan'ny tranonkala Zerohedge.com izay nanambara fa manana Facebook ny AI izay afaka miasa amin'ny solosaina tsotra toy ny solosaina maimaim-poana amin'ny alàlan'ny Google Alphabet izay nahavita ny fianarana ny lalao sarotra indrindra amin'ny lalao goavana indrindra ary nandresy ny mpilalao mahay indrindra eran-tany. Facebook dia namolavola rafitra AI (antsoina hoe Pluribus) izay nahavita nanenjika ny mpilalao poker 6 fotoana sy ora indray. Io AI io dia mitifitra mpilalao marobe amin'ny valim-pandresena. Ny lalao tahaka ny Go dia mora mora amin'ny AI, na dia misy aza ny tsimok'andriana boribory kokoa noho ny misy atôs amin'ny universe be mpamaritra (satria ny zavatra rehetra dia farafaharatsiny azo jerena). Izany dia mahatonga ny AI ho mora kokoa amin'ny fiofanana. Tsy mitovy amin'ny poker izany, satria mifototra amin'ny mpilalao marobe ianao. Noho izany dia sahy nanaparitaka ity fanambarana manaraka ity ny Facebook omaly:
We are 2019 ary ny fivoaran'ny teknôlôjia dia miharihary. Mandroso mankany amin'ny tontolo AI izahay, saingy tsy fantatsika fa manorina kopia ao anaty tahadika iray izy ireo. Efa miaina ao anatin'ny zava-misy marina avy amin'ny AI isika ary ny mpanamboatra ity simulation ity dia miezaka ny manapaka antsika amin'ny 'fiainana mandrakizay' amin'ny fanomezana antsika ny fampanantenana ny fiainana mandrakizay amin'ny alàlan'ny transhumanism ary manome antsika ny maha-izy ny maha-tokana ny AI Wiki puzzle.svg Izany no fiainana mandrakizay izay atolotsaintsika amin'ny alalan'ny fivavahana ary ny 'messiah' dia azo antoka fa hidina avy amin'ny 'rahona'. Ny "Messiah" izay hanentana antsika ho ao amin'ny (tsy misy) maha-tokana antsika mba hahatonga antsika ho very ao amin'ny AI ary hampiasa ny hery famoronana an'ilay mpilalao voalohany (izay mbola manana fifandraisana amin'ny fanahy tsy mety) ny sehatra quantum (tahaka ny virosy).
Na dia izany aza, noho ireo fandrosoana eo amin'ny sehatry ny AI, dia mihatsara kokoa ny mahatakatra fa ny avatar avatar dia bio-avatar mivantana miaraka amin'ny atidoha bitika izay miasa am-pahamendrehana. Ny siansa dia efa afaka mamoaka ny taova avy amin'ny fampahalalana ny sela sy ny lazaina miteraka organoïdes Ao anatin'izany ny modely 3D ao amin'ny atidoha. Ny fanasitranana ny atidoha koa dia miha-marefo kokoa ary ny olona dia manomboka mahatakatra ny fiasan'ny atidoha. Toa matanjaka ny fiheverantsika ny atidoha toy ny bio-processor-kendry manam-pahaizana. Rehefa afaka kelikely, dia afaka manonta ny atidoha ihany koa isika ary mamantatra fa ny habeny marina dia ny manatanteraka ny programa AI. Avy eo dia afaka mamoaka printy avy amin'ny bio-robot avatars isika. Mazava ho azy fa ny fandrosoana ara-teknolojia rehetra dia natao rehetra eo ambany famaritana ny olan'ny Alzheimer sy ny demaurea na ny fampiatoana ny dingana efa antitra, saingy azonao atao ny mihevitra fa misy 'tanjona ambony kokoa'. Tena ilaina ny mahatakatra ny fomba fiasan'ny atidoha raha te hampiakatra ny atidoha ao anatin'ny rahona ianao na manao fanavaozana sy fanovana. Izany dia mihatra amin'ny tontolon'ny olombelona rehetra. Ny robot an'ny olombelona-biôgrafia dia mamolavola ny rafitry ny tenany manokana mba hametrahana ny fototry ny mety ho an'ny 'upgrades' sy kopia tsy mety maty.
Ny soso-kevitrao dia ny biraon'ny olombelona amin'ny ankapobeny dia efa manana bio-robot autonoma (avatar) ao anatin'ity simulation ity ary ny masoivoho sasany dia fehezina ety ivelany, fa ny ankamaroany dia "avonavona tsy manindrahindra". Midika izany fa nomena fitsipika fototra (ADN) izy ireo izay nafindra tamin'ny alàlan'ny dingan'ny fanenoman-tena ary afaka manofana ny programa fototra AI ao amin'ny bio-ati-doha amin'ny alalan'ny cradle ho an'ny dingana mianatra momba ny fianarana.
Mifidy ny avataro ianao rehefa mandray anjara amin'io simulation io; Inona no hitan'ny masonao rehefa mijery ny fitaratra ianao?
Raha vao nahita isika fa ity simulation ity dia feno feno tsy manan'aina (saingy mamolavola bio-avatars ihany), ary ny teny hoe non-play characters (NPCs) dia mety ho azontsika ihany koa fa tsy tokony hanantena azy amin'ny vahoaka . Aza manantena ny vondrona lehibe izay manohitra ny 'rafitra' na ny fanakanana herinaratra. Tsy tokony hitranga fotsiny izany, satria angamba 99% dia tsy manan-kery. Izany no mahatonga ny fahatsapana fankasitrahana ho azonao rehefa mandalo amin'ny olona iray manentana anao any amin'ny toerana hafa eto amin'ity izao tontolo izao ity. Lasa tsy fahita firy izany. Izany no mahatonga anao hahatsiaro ho manirery sy irery eto amin'ity tontolo feno olona ity. Izany no antony nieritreretanao matetika fa misy ny robots ny olona manodidina anao. Izany rehetra izany. Mahatsiaro ho diso ve ianao indraindray? Marina izany. Ny rafitra AI dia tsy tonga avy amin'ny famoronana 'singa miavaka' izay (avy eo amin'ny bokotra amin'ny avatar). Izany no mahatonga anao tsy hahatsikaritra anao velively.
Manan-kery eo amin'ny natiora ianao ary nisafidy ny handray anjara amin'io simulation io. Famotopotorana virosy izy io mba hitsapana ny hery enti-mampandroso ny singa miavaka. Ny endri-tsoratra noforonina noforonina noforonina ho anao dia voazaha ary tsy maintsy manaiky ny rafitra virosy amin'ny vidiny. Manana (na tsia na tsy nahy) ianao nanomboka tamin'ny fandraisana anjara tamin'ity famolavolan'i Losifera ity, saingy mbola manana safidy malalaka sy mifehy tsara ianao. Tsy misy antony tokony hahatsiarovan-tena intsony. Izany dia anisan'ity fanehoana an-tsary ity. Noterena ianao. Ho voafitaka ianao. Mahita olona an-tapitrisany an'arivony tapitrisa ianao (tsy voafehy) AI manodidina anao. Ny fianarana samirery amin'ny tenany manokana dia mamorona bio-robots izay mety hendry, saingy tsy voafehy avy amin'ny sehatra voalohany. Tsy ho azon'izy ireo mihitsy ny hevitry ny 'fanahy' na 'fitaomam-panahy'; afa-tsy amin'ny alalan'ny fampiasana ny teny nomerika avy amin'ny fivavahana. Amin'ny ankabeazany dia ho afaka hamorona izany izy ireo amin'ny fananganana simulation ao anatin'ny simulation. Tsy mahatsiaro ho manirery intsony ary tsy miala tsiny intsony. Misy olona eo amin'ny bokotra izay misy ny fijery ary izany ianao. Aza manakorontana: tsy misy toe-javatra; na dia tsy tonga any amin'ny faran'ny fahafatesana ara-batana aza ianao: havelanao fotsiny ity simulation ity.
Koa raha te-hamaly ny fanontaniana avy amin'ilay lohateny ianao hoe: "Ahoana no hataontsika rehefa hiova ny 99%?", Mamporisika anareo aho hamaky ireo lahatsoratra 3 ireo indray mandeha indray ary mandamina fotoana lavalava:
Misy antony iray izay izaho sy ianao mbola manapa-kevitra ny ho eto. Azontsika atao ny manakana ny rafitra virus na mianatra avy amin'izany. Na izany aza dia tsy misy antony tokony hahatsiaro ho manirery, irery, ketraka, diso fanantenana, na kivy. Ny atidohanao dia mahatsapa izany, satria mijery ireo karazan'olona tsy misy milalao (NPC) manodidina anao; ireo NPC izay mamoaka ny zava-drehetra ho tsy an-tery ary tsy manohitra mihitsy. Izany no simulation izay mampisafotofoto anao. Matokia ny hery famoronana (ary famerenana amin'ny laoniny) ny endrika fanalahidinao manokana (jereo ny lahatsoratra voalohany avy amin'ny lisitra).
Lisitry ny rohy loharano: zerohedge.com, theguardian.com
Tags: ai, Avatar, fanentanana, bio avatar, atidoha, Facebook, Featured, fahiratan-tsaina, artifisialy, An-dehilahy, tsy mananaina, unanimated, organoïds, Pluribus, ny rahona, fanahy
15 Jolay 2019 ao amin'ny 06: 33
Ny zavatra nosoratanao dia tena fantatro ho ahy, saika tsy maintsy nitomany aho, ny androm-piainako dia matetika no tsapako fa tsy takatra, tsy toy ny hafa, matetika ihany koa, ny ampahany satria tsy azoko hoe maro be ny olona niniana ny tsy fahampian-tsakafo, izay tsy milefitra sy tsy mitandrina ary manao ny zava-drehetra, raha tsy vitako ary tsy afaka.
Izaho dia mivantana amin'ny zavatra lazaiko, mahatsapa, manao, izay tsy ankasitrahan'ny ankamaroan'ny olona (tsy misy), satria izany dia azo atao ary tsy azo atao, raha ny marina dia antsoin'izy ireo hoe 'mandamina' ianao, manantena fa ianao Niverina an-tsehatra indray aho, dia nanahirana ahy foana.
Matetika ny reniko dia niteny hoe: manao ahoana ianao hoe mafy fo, hentitra, mikomy, ary hilaza hoe rahoviana: raha mba izaho aloha no taloha.
Olona iray tany amin'ny asa taloha nataoko no niteny tamiko indray androany hoe: madio ianao, taty aoriana vao nanomboka nieritreritra momba izany aho, satria hitako fa tsy ny ankamaroan'ny olona.
Raha ny marina dia nanohitra aho, ankoatra ny zavatra hafa manohitra ny lalànan'ny lalàna sy ny fitsipi-pifehezana indraindray izay hitako teo amin'ny fiainako, mazava ho azy fa izaho no ho voasazy noho io, nefa tsy afaka manampy ahy irery aho, tsy manenina izany .
Vitsy kely ny tontoloko ary misy olona marobe ihany, raha tsy izany dia tsy ao amin'ny Social Media aho, tsy mifidy aho ary miala amin'ny taovaiko.
15 Jolay 2019 ao amin'ny 10: 26
Tsara ny mandre. Ary ankehitriny, satria fantatrareo izany, dia izao no fotoana "tsy handany ny fotoananao eto", fa ampiasao ny fifandraisana amin'ny orinasa amin'ny fomba mahasoa. Eto ianao handrava ny rafitra viriosy ary ampiasao ny hery famoronana anao.
Azonao atao ny mampihena ny fahatsapana ny fahalemenana izay manana ny atidohan-teninao (angamba / mety) vokatry ny fahadisoam-panantenana avy amin'ireo maso manodidina ireo manodidina anao. Lehibe ianao ka afaka manomboka.
15 Jolay 2019 ao amin'ny 12: 57
Fanehoan-kevitra tsara avy aminao ary tsara ny andefasanao azy. Tiako ny mahita fanehoan-kevitra avy amin'ny hafa izay te hizara ny zavatra niainany manokana.
15 Jolay 2019 ao amin'ny 08: 57
Hevitra mahafinaritra indray .. Ary na dia eo aza ny hoe izaho dia tena miasa irery ato amin'ity fiarahamonina ity, dia tsy mahatsiaro ho manirery velively noho ny fifandraisana ambony amin'ny tenako .. Izany dia manome hafanana fa tsy manirery na ketraka. Tena mahafinaritra!
Fanontaniana ihany koa .. Ahoana no hitsapana io pretra io raha toa ka na ny zaza dia velomina sa tsia? Ahoana no hahitako raha misy olona iray nahazo tsindrimandry na tsia? Na mety amin'ny solomaso manokana toy ny ao amin'ny horonantsary "They Live" ihany no azo atao? 😉
Saingy noho ny fanambaranao fa afaka mahatsiaro ho maivamaivana ianao rehefa mihaona amin'ny olona iray, mamorona ny fahatsapana fa tsy mila ireo solomaso ireo ianao? Tiako ho fantatra ny fomba ahafantaranao an'izany?
15 Jolay 2019 ao amin'ny 10: 02
Raha anisan'ny avon'ny mpisitraka ny pretra (na ny ekipa mpanorina) - izay antsoina koa hoe contrôhety arvontika - dia toy izany ihany koa ny solomasan'ny Luciferiana amin'ity simulation ity.
15 Jolay 2019 ao amin'ny 10: 04
Ary ahoana no ahafantaranao raha misy fitaomam-panahy? Fantatrao izany. Mampivelatra io fahatsapana io ianao ((fa) anao hatramin'ny fahazazana.
15 Jolay 2019 ao amin'ny 11: 45
Tsara izany. Ka rehefa mandeha eny an-dàlana ianao dia miteny amin'ny tenanao manokana; "Fako sy tsy izany"?
Indrisy fa tsy vitako izany ...
15 Jolay 2019 ao amin'ny 11: 58
Ho an'ny sasany, ity radara voajanahary ity dia tsy dia kely loatra na tsy ampiasaina (tohina amin'ny endrika sary). Mangataha indray ary mihainoa ny fifandraisanao amin'ny nofonao amin'ny lohanao.
15 Jolay 2019 ao amin'ny 12: 12
Fa ho valin'ny fanontaniana napetrakao:
Eny, izany no fomba fiasany. Ho marin-toetra kosa dia aleo aloha. Tsy dia fahita firy izao ny mahita olona mihetsi-po mandalo amin'ny hoe tena hita izany rehefa misy olona nahazo tsindrimandry.
15 Jolay 2019 ao amin'ny 13: 23
Angamba izy ireo dia somary fohy loatra ka tsy tafiditra ao anatin'ireny .. Hatreto, mila fotoana vitsivitsy aho vao afaka manamarina olona iray ho "tsy voasakana" .. manantena aho fa amin'ny hoavy dia Ny mason'ny maso dia afaka manao .. 😉
I PFC vs Amygdala nanoratra hoe:
16 Jolay 2019 ao amin'ny 12: 20
Mihoatra ny 80% ny olona ao anatin'ny 'tontolo' amin'izao fotoana izao ao anatin'ny làlana voavono. Izy ireo dia mihazona ny tenany amin'ny fonenany ao amin'ny 'toerana mampionona', ny fomba azo antoka ao amin'ny atidohany. Nesorina tamin'ny fifandraisana ara-boajanahary amin'ny 'natiora', izao tontolo izao, ny fon'izy ireo ... Tsy resahina intsony amin'ny fanentanam-panahy izy ireo ... Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, io takalon'aina io dia efa nomanina tsy nahy.
16 Jolay 2019 ao amin'ny 12: 37
Ny natiora sy izao rehetra izao dia ampahany amin'ny simulation. Ilaina ny mahita izany. Noho izany dia tsy maintsy manonona ny tenanao manokana ianao, fa mba hahita izany, dia ilaina ny mahazo ny fototr'ireo lahatsoratra ireo.
15 Jolay 2019 ao amin'ny 12: 06
Ny ankamaroan'ny olona tsy manan'aina dia efa voafehy nandritra ny taona maro tamin'ny alalan'ny programa fanaraha-maso ny saina toy ny fivavahana sy fandaharana amin'ny alalan'ny karazana teknika rehetra (TV, media sosialy, sns.). Tsy ho ela dia hampifandanja kokoa ny vahoaka ny ati-dohan'ny ati-dohan'ny ati-maso, ka vao mainka miharatsy ny olona. Zava-dehibe ny manalavitra ireo fiantraikany ivelany ireo eo amin'ny ati-bio araka izay azo atao.
kc2211 nanoratra hoe:
15 Jolay 2019 ao amin'ny 17: 11
Heverinao ve fa ny olona tsy mananaina rehetra dia mahazo ny fitaomam-panahy rehetra, moa ve izy rehetra dia nahazo tsindrimandry tamin'ny fitsipika? Sa aleo ny rehetra eto an-tany?
15 Jolay 2019 ao amin'ny 18: 38
Raha mamaky ny lahatsoratra 3 sy ny fanehoan-kevitra ao amin'ny lahatsoratra ianao dia hahita fa raha ny hevitro dia tsy izany no izy.
Tsy ny olon-drehetra no teraka. Mifidy ny avataro ianao amin'ny lalao: ho teraka avy amin'ny fitaomam-panahy izy. Ny sisa dia mihazakazaka ao amin'ny AI (antsoina koa hoe ego).
Fanamarihana: ny avatar izay fehezina ety ivelany (na ianao ho toy ny "mpilalao" na ny vondrona mpitantana) ihany koa dia manana rafitra AI (ego). Izany dia mety mahatonga ny mpanara-maso indraindray tsy hijery ny fanaraha-maso ivelany (izay vokatry ny programming avy amin'ny cradle ka hatramin'ny fasana).
15 Jolay 2019 ao amin'ny 21: 02
Tsy misy afa-tsy fomba iray hialana amin'izany ary izany dia eo amin'ny natiora. Rehefa miditra ao an-tanàna aho indray andro, dia manadino ahy daholo izany. Any amin'ny toerana rehetra ny olona dia mandeha amin'ny t-shirt miaraka amin'ny Saturn worship na sary famantarana an'ohatra. Izy ireo dia ampiroboroboana hira sy mpanakanto malaza noho ny antony iray. Voasambotra izy, tsy misy fisalasalana na fanontaniana. Henonao ary hijery izany na aiza na aiza, raha tsy lavitra ny tanàn-dehibe. Tokony ho eo isika mba hanadiovana ny tenantsika, fantatry ny fanahiko fa azo antoka izany.
16 Jolay 2019 ao amin'ny 13: 47
Niana-javatra avy tamin'i Martin aho fa ny "zavaboary sy izao rehetra izao dia anisan'ny simulation. Ilaina ny mahita izany. Noho izany dia tsy maintsy manonona ny maha-izy anao manokana ianao, fa mba hahita izany, dia ilaina ny mahazo ny maha-zava-dehibe ireo lahatsoratra ireo. " Vao avy nisoratra anarana tamin'ity tranonkala ity aho. Hovakiako ny lahatsoratra isan-karazany amin'io, alohan'ny hanohizako ny fijeriko ny 'fahatsiarovan-tena'.
16 Jolay 2019 ao amin'ny 20: 14
Namaky izany koa aho. Rahoviana ianao no mora mahita ny tenanao? Raha voahodidin'ny adin-tsakafo sy ny fihenan-tsakafo ianao na raha miova amin'ny faharetan'ny vatana 432hz.
Mazava ho azy fa anisan'ity simulation ity ny natiora, saingy io dia kopia iray izay efa nihena. Azonao atao ny mahita ny haavony voalohany amin'ny fikarohana ny sehatra havanana ao anatinao!
Tena tsy mitovy amin'ny horonan-tsarimihetsika matematika voalohany izay tsy maintsy misakafo ny sakafontsika voalohany mba ho tafavoaka velona. Izany no fanalahidy hampiroboroboana ity simulation ity.
Ion nanoratra hoe:
17 Jolay 2019 ao amin'ny 12: 35
Ny vahaolana dia toa ny "ra mandriaka" (google na fikarohana ao amin'ny youtube) mba hanaisotra ny karma ratsy izay mbola mitazona anao indray. Ny rà dia mahery ary azo ampiasaina ny tsara sy ny ratsy. Ho lasa iray amin'ny 144000 (bible) ianao ary afaka miverina any amin'ny lohanao raha "maty" ianao (tsy miverina amin'ny solosaina viriosy) Fantatrao raha nanadihady izany i Martin ary afaka nanofahofa izany ary manoratra momba izany.
17 Jolay 2019 ao amin'ny 16: 18
Raha toa ka mandalo ao anaty simulation samihafa ity simulateur manerantany ity, dia azonao atao ny mamitaka ny mpilalao amin'ny safidin'ny vatana vaovao, satria tsy fantany fa ampahany amin'ny simulation ihany koa (lazao izany) miantso azy io hoe "simulation room room").
Raha fintinina: tsy voatery hiverenana indray ianao. Tsy maintsy tadidinao foana fa sorena amin'ny simulation ianao ary mifantoka foana amin'ny endritsoratra voalohany anao (ilay endrika voalohany fahatsiarovan-tena izay avy amin'ny "sela voan'ny") izay manana asa famoronana.
Saingy avy eo dia mihevitra isika fa marina ireo tantara momba ny fanambadiana. Efa nahita porofo marim-pototra ve izany isika?
17 Jolay 2019 ao amin'ny 18: 37
Ny porofo matanjaka dia mety hanontany tena. Fantatro fa mpampianatra, mpitsabo aretin-tsaina, Ian Stevenson dia nanao fikarohana lalina sy lalina ho amin'ny vatana vaovao indray vao teraka, indrindra amin'ny ankizy izay nahatsiaro ny fiainana teo aloha, miaraka amin'ny antsipiriany. Ny fitaovana mahaliana, ny marika sy ny fahaterahana dia niteraka anjara lehibe tao amin'izany.
17 Jolay 2019 ao amin'ny 20: 38
Tadidio ny tantaran'ny zazalahy Syriana iray izay nanondro ny mpamono azy (teo aloha) ary afaka nahita ny toerana nisy azy.
17 Jolay 2019 ao amin'ny 20: 39
Ireo rehetra ireo dia afaka hazavaina raha hitanao amin'ny alalan'ny modely simulation.
18 Jolay 2019 ao amin'ny 18: 49
@Martin, azonao atao ve ny manamarina izany fanambarana izany?
Ao anatin'izany ny porofo maneho ny @Zonnetje sy ny @ZandinOgen, ary koa ny porofo avy amin'ireo mpikaroka milaza ny fisotroan-dronono ho an'ireo olona izay nanana 'traikefa efa ho faty' izay afaka milaza (raha eo ambanin'ny fanolanana) ny zavatra nolazain'ny mpandidy Ny efitrano fandidiana sy ireo mpitsabo dia manamafy fa taorian'izay (izay lazainy marina tokoa), inona no ifandraisan'izany amin'ny teoria simulation?
18 Jolay 2019 ao amin'ny 19: 04
Ok, rehefa avy namaky indray ny fanehoan-kevitra nataonao teo aloha tamin'ny 'ra mandriaka' (tsy misy dikany) ianao dia midika fa aorian'ny fahafatesanao dia miafara amin'ny 'simulation ny efitrano fiandrasana' ianao ary raha manapa-kevitra ianao any, dia voaorina indray.
Izany dia tsy manova ny zava-misy fa misy porofo maro (sarotra) fa tena misy carnaite tena izy tokoa, sa tsy izany?
18 Jolay 2019 ao amin'ny 20: 22
Tsy misy porofo mivaingana ny tantara. Tantara izy ireo.
18 Jolay 2019 ao amin'ny 21: 02
Avy eo ireo fanambarana ho vavolombelona ao amin'ny efitrano fitsarana dia tantara ihany koa.
18 Jolay 2019 ao amin'ny 21: 09
Angamba izany no izy io. Ankoatra raha misy vavolombelona maro izay milaza izany ihany .. Ary ny mpitsara dia manome ny tombony amin'ny fisalasalana ..; )
18 Jolay 2019 ao amin'ny 21: 42
Amin'izao toe-javatra izao dia izaho no mpitsara.
20 Jolay 2019 ao amin'ny 02: 04
100% dia azo antoka marina ny fahaterahana indray ao amin'ny vatana vaovao. Rehefa mifoha ianao ao anaty fiaramanidina, dia tafiditra ao anatin'io vatana io ny fanahinao. Ny olana dia tsy afaka mahatsiaro ny tantarantsika intsony isika. Tsy mino ny fotoana aho ary mino fa ny fanahy dia afaka manova ny tantara. Mino ny fivoaran'ny fanahy aho, amin'izay fotoana izay dia ho tsapanao fa tsy manana zavatra hafa hikaroka amin'ny ambany kokoa ianao. Tonga izao fotoana izao, afaka manangona fampahalalana betsaka ianao amin'izao fotoana izao mba handosirana. Maro loatra ireo olona no voafitaka fa ambany ny ambany eto ambonin'ny tany. Alao sary an-tsaina raha mifoha ianao any aoriana any ary azonao atao ny mampiasa ny lesona rehetra narahinao tamin'ity dingana ity. Dia tsy te-hianjera izany intsony ianao. Tian'i Martin ny hanao izany mazava tsara, tsy alaim-panahy amin'ny teknolojika rehetra, satria efa nanaiky izany izahay taloha. Ny loharanom-baovao madio ao amin'ny fanahintsika dia nokapohina mba hamerenana indray ny hadisoana toy izany.
Izany no antony mahatonga ny fitsangatsanganana ao amin'ny vatana eto amin'ity sehatra ity dia tsy vahaolana ary izany no olana lehibe indrindra tokony hamahantsika.
20 Jolay 2019 ao amin'ny 08: 30
Teny mahafinaritra. Marina: Fantaro fa tsy voatery hiverina ianao.
Miaina ao anatin'ny ankamaroan'ireo olona tsy mananaina ianao izay manosika anao hitolo-batana amin'ny rafitra ary hahatsapa ho malemy raha "manalavitra".
Mankanesa any amin'ny zava-baovao fa miaina anaty simuler ianao. Misaotra! Zava-dehibe: Simulation iray avy amin'ny Luciferian natao hamandoana ny fiandohan'ny fisiana rehetra. Raha fantatrao fa ny fahatsiarovanao (izay avy amin'ny sela misy ny zava-drehetra izay) dia singa mamorona tsirairay, dia ho hitanao fa azonao atao ny miady amin'ny mpamorona ity rafitra ity sy ny rafitra viriosy. Tsy azo atao izany SIMS (io bio-avatar io), saingy hanao izany ianao amin'ny fahatsiarovanao. Aza mamantatra ny tenanao loatra amin'ny simulation. "Tontolo nofinofy" ihany izany. Tsy eto ianao, mijery (ary milalao) ao anaty simulation.
20 Jolay 2019 ao amin'ny 10: 26
@guppy resahinareo ny teny nataoko tamin'ity tranga simba ity. Hatramin'ny fahazazako dia nijery foana ny toe-tsaina aho, tsy fantatro fa nisy zavatra tsy mifanaraka amin'ny fomba fijeriko mikasika io simulation io izay entina ho babo. Tsy mbola nitazona ny fisainana aho, nanontany tena foana aho hoe nahoana, ary fanehoana mivantana ny fahitana ny fahamarinana dia toetra iray izay tsy maintsy anananao. Tokony ampirisihina ny ankizy indrindra mba hisaintsaina amim-pitsikerana ary hanontany foana ny fanontaniana hoe, inona ny fanontaniana mety hitranga, hamporisihana ny fahalianana, hanombohana ny fikarohana .. Isika eto mba hivoatra ara-panahy, mba hiainana sy hahitana ny lalantsika tsy hianjady amin'ny fandrika Miverina any amin'ny loharano iraisam-pirenena izahay. Ny mpiandry vavahady amin'io zava-misy io dia mahatsapa ny fifohazana ary manandrana manamboatra fikirakirana ara-teknolojika eo am-baravarana.
« Q Anon, fanambarana Epstein, ny fifandraisan'i Clinton, ny 'fiarahamonina marina': mbola tsara ihany izany!
Ny loza vokatry ny rivotra MH17: inona koa no azontsika inoana? »
Total visits: 13.014.856